हनिमुन योजनामा हुनुहुन्छ ? विदेशमा हनिमुन कहाँ ! -
२०७५, १३ पुष शुक्रबार १४:४४ February 21, 2021 clickonLeaveaComment on हनिमुन योजनामा हुनुहुन्छ ? विदेशमा हनिमुन कहाँ !
हनिमुनका लागि बिश्वका प्रसिद्ध गन्तव्य
फ्रान्सको पेरिस घुम्नका लागि जति प्रख्यात छ, हनिमुनका लागिसमेत त्यति नै प्रसिद्ध छ । सिटी अफ लभ एण्ड रोमान्सको उपमा पाएको पेरिसमा हनिमुन मनाउनु नवविवाहित जोडीहरूका लागि सपना नै हुन्छ । फुड र वाइन, कला र संरचनाका लागि प्रख्यात पेरिसमा १९ औं शताब्दीमा बनेका संरचनाहरूको चार्म अझै उस्तै छ । पहिलो पटक पेरिसमा पाइला टेक्नेहरूलाई यहाँको फेसन र कला तथा क्याफे कल्चरले लोभ्याउँछ ।
त्यसबाहेक हनिमुन जानेहरूले सिन नदीमा सञ्चालित क्रुजमा डिनर गर्न छुटाउँदैनन् । पेरिस घुम्न नछुटाउने सूचीमा पर्छन्— लुभ्र म्युजियम, नोट्रे ड्याम डे परेसी तथा सिन नदी । कम बजेटमा पनि पेरिस घुम्न र त्यहाँका होटेलमा बस्न सकिन्छ । अग्रिम रूपमा बुकिङ गर्दा सस्तो टिकट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
थाइल्यान्ड विश्वमा अत्यधिक पर्यटकको रोजाइमा पर्छ । थाइल्यान्डका फुकेट र पटाया घुमघामका लागि चर्चित सहर हुन् । विशेषगरी यहाँको रात्री जीवनले पर्यटकहरूलाई लोभ्याउँछ । फिफि अैसल्यान्ड, माया बि, मंकी, थाई, जेम्स जस्ता बिभिन्न टापुमा माया साट्ने जोडीको लस्कर देखिन्छ । विश्वमै सर्बाधिक बढी घुमिने चौथो सहर हो— बैंकक ।
यहाँको रात्री जीवन निकै लोभ लाग्दो हुन्छ । बिभिन्न ट्राभल एजेन्सीहरूले थाइल्यान्डको हनिमुन प्याकेज बिक्री गर्दै आएका छन् । सस्तो टिकट, खानपान तथा बसाइले गर्दा थुप्रै नेपालीले थाइल्यान्डलाई आफ्नो रोजाइमा राख्दै आएका छन् ।
इन्डोनेसियाको बाली धेरै पर्यटक भित्र्याउने ठाउँ हो । साना र ठूला गरेर १३ हजारभन्दा बढी टापु भएको इन्डोनेसियामा पुराना मन्दिर, हिमाल, वन्यजन्तु आदि हेर्नलायक थुप्रै ठाउँ छन् । कोमोदो, ओरोबीच, बन्दा अैल्यान्ड, लेक टोबा, टोगेन अैसल्यान्ड, बाली, माउन्ट ब्रोमो, बेलिटुङ अैल्यान्ड हनिमुनका बेला बढी घुमिने ठाउँ हुन् । नेपालबाट बालीका लागि ४ रात तथा ५ दिनको जोडी प्याकेज डेढ लाखसम्ममा उपलब्ध छ ।
फ्लोरिडा, लस क्याबोस, मेक्सिको, सान्टा बारबरा, क्यालिफोर्निया, माइकोनोस, ग्रिस, थाइल्यान्ड, बर्मुडा, रिभिरा, मेक्सिको, इन्डोनेसिया, भियतनाम, बेली, सेन्ट लुसिया, कोस्टारिका, अैल्यान्ड अफ हवाई, सेन्ट भिन्सेन्ट र द ग्रेनाडिन्स, नसाउ प्याराडाइज अैल्यान्ड–बहमास, इबिजा–स्पेन, ओर्लान्डो–फ्लोरिडा, क्याम्बोडिया, अैसल्यान्ड, पेरिस, न्यु ओर्लियन्स–लुजियाना, लण्डन–इंग्ल्यान्ड, रोम–इटली ।
विप्लव प्रबक्ता प्रकाण्डको प्रश्न : निर्मला पन्त, ओली, प्रचण्ड, देउवा र बादलकी छोरी भए के हुन्थ्यो ?
नेकपा बैठक : अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित
चिया को खानि, प्रक्रिती को धनी, मनमोहक सुन्दरता को नगरी – ईलाम
२०७५, २१ असार बिहीबार ०३:५३ July 5, 2018 clickon
शनिबार बिहानबाट ‘हट एयर’ बेलुनमा उडेर अब पर्यटकीय नगरी पोखराको मनोरम दृश्यावलोकन गर्न पाइने
२०७५, १ मंसिर शनिबार ०४:५५ November 17, 2018 clickon
सेती अञ्चल को गरिमा बोकेको, नेपाल को गौरब हाम्रो खप्तड के कम छ र? हेर्नुहोस र सारा बिश्व लाई गौरबका साथ शेयर गर्नुहोस्
२०७५, २७ भाद्र बुधबार ०३:१२ September 12, 2018 clickon